musha nyika dzakabatana Vatambi veBasketball Paul George Childhood Nhau Plus Untold Biography chokwadi
Wedu Paul George Biography anokuudza Chokwadi pamusoro penyaya yake yehucheche, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Hupenyu Hwemhuri, Musikana / mukadzi kuti ave (Daniela Rajic), Vana (Olivia naNatasha George). Kunyanya zvakadaro, vana vehama dzake (Teiosha naPortala), Hupenyu hweMunhu, Mararamiro uye mambure akakosha.
Zvichitaurwa zviri nyore, isu tinoratidzira nhoroondo yeupenyu yePG13, mutambi weAmerican Basketball uyo hanzvadzi yake aive mudzidzisi wake wepamberi achiri mudiki. Nyaya yedu inotangira kubva pamazuva ake ekutanga kusvika panguva iyo nyika payakamuziva.
Kuti utore yako autobiography chishuwo, tinopa trajectory gallery yezviitiko zvakakomberedza hupenyu hwake. Pasina kupokana, izvo zvaunoona pazasi zvinopfupikisa Paul George's Biography.
Paul George Biography - Tarisa Hupenyu hwake uye Kubudirira Nhau.
Ehe, munhu wese anoziva maitiro aakazvisimbisa iye seanotungamira epakati pevadziviriri muNBA. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanoziva nezve Paul George's Bio.
Kunyangwe akarumbidzwa, sezvakataurwa pamusoro, isu tinoziva kuti vashoma chete vevateveri vake vakaona yakadzama ongororo yehupenyu hwehupenyu hwake.
Isu takaigadzirira nekuda kwako uye rudo rwedu kuna Paul neNBA. Saka ikozvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Paul George Childhood nyaya:
Yevatangi veBiography, Paul George akazvarwa pa2nd yaMay 1990 (ikozvino 31 makore nemwedzi 4) kuna amai vake, Paulette George, uye baba, Paul Clifton Anthony George Sr, muLos Angeles, California.
Iyo NBA Star yakasvika mumhuri semwana wekupedzisira, asi iye oga mwanakomana pakati pehanzvadzi dzake mbiri, Teiosha naPortala. Vanun'una vaPaul George, kusanganisira iye, vakazvarwa kunze kwemubatanidzwa pakati pevabereki vake, inoratidzwa pazasi.
Sangana naPaul George nevabereki vake - baba vake (Paul Clifton Anthony George Sr) naAmai (Paulette George).
Kukura-up Los Angeles:
Iyo nyanzvi yeAmerican basketball yaigara hupenyu hwakawanda muPalmdale, California. Akakurira pamwe chete nehanzvadzi dzake chete nevabereki vake.
Zvinonakidza kuziva kuti Vakoma Vake vaviri maSista (Teiosha naPortala) vakapindawo muMitambo.
Semwana, Paul George akayemura Basketball Star, Kobe Bryant. Zvakare, akatanga kutsigira kirabhu yeIdol yake, Los Angeles Lakers uye maClippers, zvichiteerana.
Uyu ndiPaul mudiki muhembe yake yebhasikiti.
Chinhu chinonakidza pamusoro paPaul George ndechekuti aisapfeka mbatya senge vamwe vechidiki muUS. Pane kudaro, ainakidzwa nenguo yebhasikiti uye aipfeka zvisina yambiro, sekuonekwa mumufananidzo uri pamusoro.
Yakawanda yenguva yake yemahara akapedza achitamba basketball kungava kupaki iri kumabvazuva kwePalmdale kana imwe pane imwe nasisi vake mukuru, Teiosha.
Akaunza Paul kumusoro achida mutambo. Pazasi payo pikicha yaTeyosha, hanzvadzi hombe yaPaul.
Hanzvadzi yaPaul, Teiosha aine timu yePepperdine NBA
Akaona mutambo wacho uchifadza uye akazova hobho. Nekudaro, zvaive zvisipo kusvikira apinda Chikoro chepamusoro aigona kuzotora mutambo uyu zvakanyanya.
Pazasi pane zvakare chidimbu chevhidhiyo humbowo naTeyosha, hanzvadzi yaPaul mukuru.
Paul George Mhuri Mamiriro:
Kunyangwe ivo vabereki vake vaive vasina kupfuma uye vasiri vatambi, vaifarira zviitiko zvemitambo. Uye saka zvakavakwa kuda zvemitambo pakati pevana. Nekuda kweizvozvo, Paul George aive nehudiki hunonyaradza.
Isu tinoziva kuti Baba vaPaul George vakamboshanda mabasa eruvara rwebhuruu kukambani yemarimu uye semuvezi. Asi, zvakadaro, amai vake muimbi akanaka. Teiosha, hanzvadzi dangwe raPaul, akatamba basketball apo Portala ainakidzwa nemutambo weVolley Ball.
Paul George Mhuri Kubva:
Kunyangwe mutambi ari kusimukira akazvarwa kumabvazuva kwePalmdale, guta riri kuchamhembe kweLos Angeles County, midzi yake yakateerwa kubva mukufamba kwenguva refu kwemhuri dzeAfrica -America.
Rutivi rwekumabvazuva rwePalmdale rwakanga rwakasviba uye rwevaSpanish panguva yekuzvarwa kwake.
Vabereki vake vaifanira kubva kuSouth Central Los Angeles vaine tarisiro yekugara yakaderera-bhajeti dzimba. Iye, saka, ane nyika yeAfro- America uye yerudzi rwevatema.
Mepu inoratidza midzi yaPaul George
Paul George Dzidzo:
Kudzidziswa zvechikoro kwevechidiki chap ine kutanga kwebasa kutanga kwaive kukosha. Asi, Paul George, kunyangwe hazvo aifanira kutarisa padzidzo, kutamba kwake basketball kwakaramba kwakanyanya.
Mugore rake rekutanga pachikoro chepamusoro chePete Knight, Palmdale, akatanga kutamba mutambo webasketball wakarongeka.
Akaridzawo timu yevarsity mumakore matatu apfuura echikoro chepamusoro pasi pekudzidzisa kwaTom Hegre.
Wechidiki Trece kuchikoro chesekondari.
Zvizhinji gare gare, akaenderera kuPepperdine University, iyo yekutanga hafu yemesita asati anyoresa muCalifornia State University, Fresno, kune degree rekukoreji, kwaaka nyeredzi mumwaka miviri.
Chiono chemuchadenga cheCalifornia State University.
Paul George Ekutanga Basa:
Ndichiri kukoreji, mutambi wechidiki akatamba kwemakore maviri. Akatumidzwa mutambi anonakidza kwazvo mudunhu reWest panguva iyoyo.
Mushure meizvozvo, akasarudza Indiana Pacers muna 2010, zvichikonzera kukodzera kwake kukoreji mumakore ake ekupedzisira.
Paul aive pakati pevaviri rookies kubva ku2010 NBA Draft kuve mumutsetse wekutanga wemitambo yake ye2011. Mwaka wakapera naGeorge akatumidzwa zita reNBA All-Rookie Yechipiri Chikwata.
Paul George - panguva yebasa rake rekutanga.
Paul George Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Mushure mekuita basa repamusoro rekusekondari uye kugona kunoshamisa padanho repakoreji, Paul airatidzika kunge asati agadzirira iro rakakura chunk yemutambo.
Uye saka aifanirwa kutora chikamu mukuvandudzika kukuru kwehunyanzvi hwake. Pakati pe2012 ne2013 yaive mwaka wake wekubuda muNBA; akavhaira anopfuura gumi nemanomwe (17) mapoinzi pamutambo wega wePacers.
Kupemberera kukunda kweIndiana Pacers.
Iye zvakare akahwina iyo NBA's Yakawanda Yakagadziridzwa Player mubairo. Uye zvakare, akatungamira Pacers kuEastern Conference Finals muna 2013 na2014.
Paul George's Biography- Kumuka Mukurumbira:
Akatamba Oklahoma City Thunder kubva 2017 kusvika 2019 bhizinesi risati ramutora kuenda kuLa Clippers.
Paul airidzawo mwaka miviri neOklahoma City Thunder, achitamba pamwe chete Kawhi Leonard, mumwe mutambi we basketball, ESPN.
Paul zvishoma nezvishoma akazozivikanwa zvakanyanya nekugara achishanda uye kugona kwake kurovera pamatanho ese matatu. Uye zvakare, senhengo yenguva ina yeNBA Yese-Inodzivirira Timu, iye ari 4-nguva uye akanakisa epimeter mudziviriri muNBA.
Paul George aine mashoma emubairo wake.
Ndiani Paul George Achifambidzana?:
Kunyangwe asina kuroora, Paul George parizvino ari muhukama nemusikana wake, Daniela Rajic. Nekudaro, mishumo ine izvo kuti vaviri vacho havasati varoora.
Rajic akaberekerwa muMiddle Village, Queens, New York. Iye ndewerudzi rweSerbia uye anoshanda pamwe chete netambo yekushambira inonzi NUDESWIM.
Mufananidzo weiyo modhi, Daniela Rajic.
Ivo vaviri vakasangana mumwe nemumwe mu2013 uye vakavimbisana munaNovember 2020. Ivo kubvira vanga vari pamwechete kunyangwe paine kupokana kwakatenderedza hukama hwavo.
Kunyangwe iro banga risati rasungwa, vane vanasikana vaviri pamwechete (Olivia naNatasha George).
Paul George nerudo rwehupenyu hwake.
Zvimwe Zvakawanda Nezvevana:
Olivia George, mwana wekutanga nemwanasikana kuNBA Star, akazvarwa musi wa1 Chivabvu 2014. Munguva yekuzvarwa kwake, kwaive nekukakavara pamusoro pebaba vake. Paul akazongobvuma kutora mutoro mushure mekunge vamuendesa kudare.
Makore matatu (3) akatevera, Natasha George, mwanasikana wechipiri waPaul, akazvarwa. Akauya munyika musi wa1 Mbudzi, 2017. Senge panguva ino, Paul George naDaniela Rajic vaive pamwechete seMusikana asi vasina kuvimbisana.
Mufananidzo wevana vaPaul George.
Paul George Hupenyu Hwemhuri:
Parizvino, imba yaPaul George yakachengetedza hunhu asi hwepakati mararamiro. Ivo vaigara mudzimba dzakachipa dzimba asi havana kumborasa tarisiro pamikana kune hukuru.
Mufananidzo wemutambi ane tarenda nemhuri yake.
Kuzvipira kukuru kwevabereki vake uye kwehama, tinogona kutaura, zvakanyatso bhadhara. Ngatitorei imwe yakajeka maonero enhengo dzemhuri yake.
Zvimwe Pamusoro paPaul George Baba:
Paul Clifton Anthony George, Sr. ndiye Baba kuNational Basketball Association (NBA) mutambi. Akamboshanda yeblue-collar mabasa kukambani yemarimu uye semuvezi.
Iyo pix yaPaul George Baba.
Paul George Sr. akasangana ndokuroora Paulette Ann muSouth Central Los Angeles. Ivo vanogara nemufaro muPalmdale, California.
Zvimwe Pamusoro paPaul George Amai:
Paulette Ann George (née Wilson) ndiye mutambi weNational Basketball Association (NBA). Iye anogadzira yakasarudzika, yemazuva ano mabasa eiyo gallery, bhizinesi uye epamhepo nharaunda.
Mufananidzo usingawanzoitika waMhamha vaPaul.
Paulette Ann George (née Wilson) anoshanda anoratidzwa muCalifornia uye hunyanzvi hunoratidza muUS. Tarisa uone ichi chisungo chemhuri.
Zvimwe Pamusoro paPaul George Vanin'ina:
Teiosha, ari iye dangwe hanzvadzi, akatamba basketball kuPepperdine University kuMalibu, California, uye Portala, hanzvadzi yake yechipiri, aive mutambi wevolleyball muCalifornia State University, San Bernardino.
Mufananidzo wePG 13 nehanzvadzi dzake (Teiosha naPortala).
Zvimwe Pamusoro paPaul George Hama:
Kunyangwe hazvo isu tichiri kuziva hama dzake zhinji, iye ane dzimwe nhengo dzemhuri dziri muU.S., vanosvika makumi manomwe. Vakakodzera kucherechedzwa vazukuru vake nevaninina.
Paul George Hupenyu Hwega:
Paul, munguva yake yemahara, anoonekwa kazhinji kunze kwekugona kwake kubata hove. Saizvozvowo, George nababa vake vaigara vachipedza nguva vari pamwe chete vachiredza.
George munguva yake yekusununguka, kubata hove.
Iye anofarira zvemagariro enhau anoshandisa chikuva kusvika kune vateveri vake vari kusimuka. Parizvino, akaunganidza pamusoro pevane 8.9M vateveri pane yake Instagram peji uye yake Twitter account; vanopfuura 2.3M Vateveri.
Paul George Mararamiro:
Mudiki Trece, sekudaidzwa kazhinji nevazhinji, ari kurarama nguva yake yakanaka izvozvi. Asi, nezvose izvo vimbiso yekutarisa kwemafuta, haisi nhau kuti iyo NBA Star yakawana zvimwe zvigadzirwa zvepamusoro.
Iye ane yake Ferrari 458 Italia Spider inokosha $ 300,000. Iye zvakare akambowana iyo $ 2.5 mamirioni Giest Imba muCalifornia.
Iyo Yakanaka Ferrari 458 Italia Spider inokosha madhora mazana matatu.
Zvinoenderana networthbro, Paul ane mari yekufungidzira inosvika madhora makumi maviri emadhora. Mukupera kwegore ra20, LA Clippers akawedzera kondirakiti yaGeorge yemamwe makore mana pa $ 2020 mamirioni. Chibvumirano chiri kunze kwemamiriyoni makumi matatu nemazana mana emamiriyoni emadhora chakamuvimbisa muhoro we190.
Paul George's Untold Chokwadi:
Asides kubva kune irwo ruzivo rwataurwa pamusoro apa, pazasi pane mashoma echokwadi anogona kukanganisa kunakidzwa kwako.
Chokwadi # 1: Kukuvara kwaPaul George:
Iyo NBA Star yakambosimbisa kutsemuka kwakavhurika kweese tibia yake nefibula yake. Chakanga chiri chiitiko chinotyisa chaida kuvhiiwa nechimbichimbi kugadzirisa. Mapfupa akapinda kuburikidza neganda, sekuonekwa mumufananidzo pazasi.
Kukuvara kwakapotsa kwapedza basa raPaul.
Neraki raPaul, kutsemuka kwakapora kwakasimba mumwedzi mitanhatu yekuvhiyiwa. Kunyangwe iye akanyatsosuwa mwaka 2014-2015 basketball mwaka.
Chokwadi # 2: Amai vake, sosi yekukurudzira:
Pa10, Paul akatarisa amai vake vachirwara nesitiroko nekuda kweropa rakagwinha iro rakaita kuti aome mitezo kubva kuruboshwe. Izvo zvinoitika, anodaro, zvinomusimbisa munguva dzekuora moyo. Aizozvimanikidza kuti arwe kuburikidza nenyaya, sezvakangoita amai vake pamubhedha weurwere.
Chokwadi # 3: Musikana waGeorge:
Chirevo chacho chine kuti Daniela Rajic aimbove mubvuri. Akashanda seanobvarura mune imwe yeakashata mabhendi eAmerica, Tootsies. Munguva yake nguva semudzidzi paYunivhesiti yeMiami muFlorida.
Iye akashandawo semutambi kumakirabhu akati wandei ane mukurumbira muMiami kubhadhara mari yake yekoreji.
Moyo wake weGoridhe unoratidzwa muzvirongwa zvake zvakasiyana. Semuenzaniso, George akambounganidza madhora zviuru makumi maviri nezvishanu zveDhipatimendi reZvaraidzo nePalmdale, achivabatsira mukumutsiridza matare ebasketball.
Paul pane imwe yezvipo zvake.
Chipo chiri padivi pemari yakaitwa kubva kumutambo wake wegore wekubata hove. Mari idzodzo dzaishandiswa kugadzirisa zvivakwa zvekare senge mapaki.
Chokwadi # 5: Unofarira NBA Player:
Kunze kwekuredza, tiye NBA Star anofarira kuona mafirimu; mutambi wake waanofarira ari Jamie foxx. Zvichakadaro, waanofarira NBA Player kubva paudiki ari Kobe Bryant.
Mumwezve mufananidzo naKobe Bryant.
Chokwadi # 6: Chitendero:
Hazvisi zvitsva kuti munhu wese ane maitiro ake ekutenda. Kunyangwe asingatendi kuti kuna Mwari anotenda mukusavapo kwaMwari. Paul George asinganyari anozivisa chimiro chake maererano nekutenda kwake. Anotenda muna Jesu Kristu, uye munhu wese ari muMufananidzo waMwari. Iye muKristu.
Paul George's Bio Dhata
Zita rizere: Paul Clifton Anthony George
Zita rekudanwa: PG13 / PG / King George / Mudiki Trece
Zuva rekuzvarwa: Makore makumi maviri nemashanu nemwedzi mitatu
Nzvimbo yekuzvarirwa: Palmdale, California, US
Chazvino Chikwata: Los Angeles Clippers
Nzvimbo: Diki kumberi / Kupfura murindi
Dzidzo: Knight High Chikoro, Fresno State University
Baba: Paul George Sr.
Amai: Paulette Ann George
Vanun'una: Teiosha naPortala
Musikana: Daniela Rajic
Vana: Olivia George, Natasha George
Zuva Chikwangwani (Zodiac): Taurus
kukwirira: 6 ft 8 inches (2.03 m)
Muhoro: $ Miriyoni makumi maviri (35.4)
Social Media: Instagram (@ygtrece), 8.9M Vateveri & Twitter (@Yg_Trece), 2.3M Vateveri
Kutenderedza izvozvi Paul George Biography uye Nhau Yehucheche, tinoona kuti kunyangwe aine yake yemhuri ine mari shoma, kushinga uye kushanda nesimba kwaibuda kubva kuvabereki vake kwakabhadhara Big time.
se Lebron James, Amai vaPaul George kupokana kwakangowedzera simba rake uye kwanga kusiri kwekutadzisa kubudirira.
Ishungu yedu yaErnest kuti iwe wawana izvi zvichinyora zvinonakidza uye zvinojekesa. Saka ita zvakanaka kunyorera kune hwakawanda biography chokwadi neepamusoro-notch kururamisa uye kurongeka nguva dzose.